Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု နည်း
Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု နည်း
Posted by Mobile House on Nov 16, 2012 in Computers & Technology | 16 comments
Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု နည်း တင်ပေးလိုက် ပါတယ်
၈။ ညာ ဖက် အောက် မှာ တွေ့ တဲ့ + – နဲ့ ဖြစ် စေ ကို မြေ ပုံ အကြီး ချဲ့ချင် တဲ့ နေ ရာ ကို နှစ် ချက် တို့ ခြင်း ဖြင့် ဖြစ် စေ ။ အကြီး ချဲ့ ကြည့် နိုင် ပါတယ် ။
၁၀။ အပေါ် က လို လေးထာင့် ကွက်းနဲ့ ပေါ် လာ ပါ မယ် ။ အဲ့ အကွက် ထဲ ကို မြို့ ၀င် အောင် ချိန် လိုက် ပါ ။ ပြီးရင် ခဏ စောင့် နေရင် Done ဆို တာ လေး လင်း လာ ပါမယ် ။နိုပ် လိုက် ပါ ။ခဏ ထပ် စောင့် ပါ သူ ဘာသူ စ ဒေါင်း ပါလိမ့် မယ် ။
၁၁။ GPS ဖွင့် ထား ရင် တော့ တခြား မြို့ တွေ ကို ကြည့် လို့ ရပါတယ် ။သို့ အဲ့ လို ဖွင့် ကြည့် ရင် ဓာတ်ခဲ ပို စား ပါတယ် ။ပြီးတော့ ကြည်အောင် လဲ စောင့် ရတယ် ။ အဲ့ တော့ ကိုယ် သွား နေ ကြ မြို့ တွေ လိုက် offline ဆွဲထား လိုက် ရင် GPS လဲ မလို တော့ ဘူး ….
ကဲ ကျန်တော တွေ တော့ စမ်း ကြည့် တော့ နော် ။ကျွှန်တော် တင် တဲ့ ပိုဒ် တစ် ခု က Android သုံးတဲ့ သူ တွေ တွက် အသုံး တည့် မယ် စိတ် ကျေ နပ် မယ် ဆို ပင်ပန်း ရကြိုး နပ် ပါ ပြီ …..
အခုလို ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ၊ ပိန်းတိန်းတိန်းကျုပ်အဖို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်
http://www.mobilehouse.co.nr ကို ဝင်ကြည့်တော့ အပလီကေးရှင်းတော်တော်များများကို တွေ့ လို့ဖြေးဖြေးချင်း စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်
အပလီကေးရှင်းတွေ ဂိမ်းတွေ လိုချင်ရင် ကျုပ်သုံးနေကြဟာကတော့
““ Blackmart Alpha ””” ဆိုတဲ့ ဟာလေးပါ
အဲဒီ Blackmart Alpha ကို ဖုန်းဆိုင်တိုင်း ထည့်မပေးပါဘူး
“၅။ အိမ် အပြင် အမိုးလွတ် တဲ့ နေရာ ကို ထွက် ပါ ။” ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲ။
Google လုပ်ရမှာပျင်းလို့ ဒီမှာပဲ ကြုံတုန်းမေးလိုက်တော့မယ်။ Andriod os ပေါ်မှာ root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာစာ ဖတ်ရအောင် လွယ်တဲ့ နည်းလေးများရှိလားဟင်။
Samsung galaxy စီးရီးတွေမှာ တော့ရပါတယ် ။
ဟုတ်။ Galaxy Nexus နဲ့ Nexus7မှာဖတ်ချင်လို့ပါ။
http://www.mobilehouse.co.nr မှာ http://moiblehouse.blogspot.com/2011/12/android-root.html ဒီမှာကြည့် ပါ ။
ကျေးဇူးပါ။ install လုပ်လို့ရပြီးမှ setting-> Language & input -> Language list ထဲမှာ Zawgyi One မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ (တခြား ဖုန့်တွေတော့ရှိပါလျက်နဲ့)။ Setting -> Display -> Font မရှိဘူး။ os 4.2 မှာ menu မတူတော့လို့ မရတာလား။
အရင့်အရင်အခေါက်တွေလိုပဲ တ၀က်တပျက်နဲ့ လက်လျှော့လိုက်ပါပြီရှင်။ ဒီပုံစံနှင့်ဆို မြန်မာစာကို ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ရကိန်းမမြင်ဘူး။
အကောင့် အပ် လိုက် ပါ ။တခြား နည်း တွေ ရှိ ပါ တယ် ။
ကျုပ်တို့ဆီမတော့.. ဂျီပီအက်စ်လေးဖွင့်.. ပါးစပ်က.. ပေါ့အိုင်စ်းပြောလိုက်တာနဲ့.. အနီးနားက Popeyesဆိုင်နေရာတွေပြနေတာ…
အဲဒါနဲ့.. သူ့လမ်းညွှန်အတိုင်း.. သွားပြီးစားလိုက်တယ်..။
တောထဲတောင်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်ရော.. ဂျီပီအက်စ်မြေပုံက… မြင်ရသလားဟင်င်…
internet ရ တယ် ဆို ရင် တော့ Satellite ပြောင်းထား ရင် တော့ ကြည့် လို့ ရပါတယ် ။တောတောင် တွေ ကို သေသေချာချာ မြင် ရမှာ ပါ ။
Google Map ထဲမှာ ကြည့်ရင် အချို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နေရာတွေဟာ
ဝါးသွားတယ်၊ မကြည်ဘူး ပြောပါတယ် …
အဲဒါကတော့ဖြင့် အတော်လေး ညစ်ဖို့ကောင်းသား …
ကျုပ်တို့ ရွာကို မက်ထဲမှာ ရှာကြည့်တော့ ..
ရွာ မရောက်ခင် ၈ မိုင်လောက် အလိုမှာ မြေပုံက ဝါးသွားရော …
ဒါက Google Map အကြောင်း ကြုံတုံး ပြောပါတယ် ..
သဘာဝ သလင်း ကျောက် နဲ့ တခြား သတ္တု တွေ ကြောင့် နဲ့ တပ် နယ် မြေ ဆို ၀ါး ပါတယ် ။
Thanks for apps, but your site is blocked in Google Chrome. They said “malware distributor, has been inserted into this web page.” You need to check and fix it. But nothing problem in Mozilla and IE.
thz . i will try to fix.but not ok !
Google Chrome has blocked access to this page on http://www.mobilehouse.co.nr.
Content from http://www.csalim.com,aknown malware distributor, has been inserted into this web page. Visiting this page now is very likely to infect your computer with malware.
Mozill က ပဲ ၀င် ကြည့် လိုက် ပါ ။